अन्तराष्ट्रिय – Nepali Profile
access_time २६ असोज २०७५, 2:54 am
काएरो, २५ असोज (रासस÷एएफपी) ः इजिप्टको एउटा सैनिक अदालतले बिहिबार १७ जनालाई बम आक्रमणमा दोषी ठहर गर्दै मृत्यु दण्डको फैसला गरेको छ । ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनेगरी चर्चामा बम विस्फोटन गराइएको घटनामा दोषी ठहर…
access_time २४ असोज २०७५, 3:00 am
नयाँ दिल्ली, २३ असोज (रासस÷सिन्ह्वा) ः भारतको मध्य क्षेत्रमा रहेको छत्तिसगढ राज्यस्थित एक स्टील कारखानामा विस्फोट हुँदा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । प्रान्तीय राजधानी राइपुरबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा भारतीय…
प्रहरीको गोलीबाट अमेरिकामा मारिए नेपाली, किन हान्यो प्रहरीले गोली ?
access_time १३ भाद्र २०७५, 5:56 am
अमेरिकाको कोलोराडो वेष्टमिनिस्टरमा प्रहरीको गोलीबाट नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । मारिनेमा कोलोराडो निवासी २५ बर्षीय बिरेन्द्र ठकुरी रहेका छन् । कोलोराडोको रान्च रिजर्भ पार्कवे र फेडेरल बोलुभर्डमा शनिबार बेलुका भएको घटनामा प्रहरीले नेपाली युवामाथि…
access_time १० बैशाख २०७५, 4:19 am
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु कतिपय राजनैतिक चर्चाभन्दा पनि सेक्स स्क्याण्डलका कारण चर्चामा आए । उनीहरुको यही चर्चाले कतिपय राष्ट्रपतिहरु आलोचित छन् । सेक्स स्क्याण्डलको रहस्य खुलेपछि केही राष्ट्रपतिले आफ्नो नैतिकताका आधारमा पद पनि त्यागे ।…
चीनसँग यति धेरै किन डराउँछ भारत ? यस्तो छ मुख्य…
access_time १० बैशाख २०७५, 3:32 am
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणलाई नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक हप्ता पछि नै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको…